Ny soritr'aretina amin'ny fahantrana amin'ny herinandro, ny fitovizan'ny lahy sy ny vavy, ny horonan-tsary
2 herinandro bevohoka
8 herinandro bevohoka
12 herinandro bevohoka
16 herinandro bevohoka
Ny Schwangeren Q sy A
Ny soritr'aretin'ny pregnancy isan-kerinandro
Ny horonantsary momba ny fitondrana vohoka sy ny fitoviana
Tongasoa eto amin'ny tontolon'ny bevohoka! Milaza izahay fa amin'ny tsikitsiky satria izy io dia iray amin'ireo zavatra maro izay hampiasainao mandritra ny herinandro maha-bevohoka anao. Ny fiterahana dia mety ho fotoana mahafinaritra indrindra eo amin'ny fiainan'ny vehivavy, saingy feno fanontaniana sy ahiahy koa izany. Rehefa mihalehibe ny bevohoka, dia mety tsy ho fantatrao ny zavatra andrasana isan-kerinandro ary te ho liana amin'ny soritr'aretina vohoka isan-kerinandro. Afaka manampy isika.
Ho an'ireo izay manontany tena momba ny daty tokony hatao dia manolotra isika kerinandro momba ny fitondrana vohoka amin'ny fotoana mety, izay manampy betsaka. Manome torolalana momba ny fomba hanisana ny daty tokony hatao koa izahay. Miverena matetika mba hampahalalana hatrany momba ny soritr'aretin'ny bevohoka amin'ny herinandro. Tsidiho ny fizarana Q sy A mba hametraka fanontaniana ary hamaky valinteny. Arovy izahay amin'ny fe-potoana mandritra ny herinandro vohoka isaky ny herinandro. Mahita famantarana mahazatra ve ianao, tsy mety? Inona no antony tokony hisalasalana momba ny vohoka vaovao anao? Tsy Dr 'izahay fa ny fampahalalana azontsika dia afaka manampy. Azontsika atao ny manapa-kevitra raha tsapanao fa misy fiantraikany amin'ny herinandro amin'ny herinandro ny fitondrantena mandritra ny fitondrana vohoka. Indray mandeha, tsara kokoa izany rehefa fantatrao izay tokony hananana herinandro. Manome herinandro isan-kerinandro izahay, manomboka amin'ny Ny soritr'aretina vohoka amin'ny herinandro 1. Inona ny soritr'aretina vohoka amin'ny herinandro 2, amin'ny herinandro 5, sns. Misy herinandro iray isan-kerinandro amin'ny famantaranandro momba ny bevohoka, miaraka amin'ny kalandrie mba hanaraha-maso ny vatanao sy ny zanakao amin'ny alalan'ity zava-mahagaga ity
Aiza no ahafahantsika manolotra izany horonantsary vohoka toy izany koa. Mifantoka voalohany amin'ny vaovao momba ny fahasalamana aloha izahay ary manome toro-hevitra sy toro-hevitra momba ny fitondrana vohoka mandritra ny herinandro ho an'ny bevohoka, toy ny rohy video etsy ambony. Hoentina any aminao izy ireo Consumer Health Digest. Na dia mihamitombo aza izahay, ary ny lahatsary lavidavitra kokoa eo amin'ny pejy etsy ambany dia miresaka momba ny fividianana zazakely. Hanampy lahatsoratra tsy tapaka momba ny fividianana zaza amam-behivavy, lisitry ny fanomezana, eny fa na dia hevitra tiany ho an'ny zaza aza.
Saingy tranonkala hafa mila fanazavana fanampiny momba ny fitondrana vohoka? Mihevitra izany isika! Ho an'ny iray, ny kalkeran'ny herinandro ho an'ny bevohoka dia hanampy amin'ny fanisana ny daty marina. Azonao atao ny mametraka fanontaniana vitsivitsy voalohany amin'ity hevitra ity: Inona ny soritr'aretin'ny bevohoka isan-kerinandro? Izay aloha vao maraina fampitandremana famantarana ny fitondrana vohoka? Ahoana no ahafantarako raha bevohoka aho, na mitaiza ny fitsaboana, na ny fomba fisafidianana sy ny mpitsabo. Angamba ianao manana fanontaniana momba ny STD sy ny fitondrana vohoka, na ny fampiasana azy mandritra ny bevohoka. Inona avy ireo karazana trimestrialy isan-karazany, ary ny soritr'aretina bevohoka mandritra ny herinandro isaky ny dingana. Angamba manontany tena ianao momba ny fikarakarana ny tazomoka, ny rosewood baby, sns. Amin'ny alalan'ilay kalkulateur herinandro ho an'ny bevohoka sy ny fampahalalana hafa ao amin'ny tranokalanay, Ny fahantrana amin'ny herinandro, tiantsika ny hamaly ireo fanontaniana ireo sy ny maro hafa! Manazava ny fitondranao vohoka amin'ny fomba fohy, eo amin'ny làlam-pandaminana, mandritra ny herinandro maha-bevohoka anao, ny telo volana ka hatramin'ny trimestre. Manolotra anao mihitsy aza ianao amin'ny fampahalalam-baovao sy torohevitra alohan'ny fitondrana vohoka, zavatra hodinihina alohan'ny hiterahanao. Mandeha tsikelikely izahay, miresaka momba ny famelomana sy ny fananganana zaza salama amin'izao tontolo izao. Amin'ny fampivoarana tsy tapaka, ny valin'ny herinandro ho an'ny bevohoka amin'ny fotoana voatondro dia hanome fanazavana marina. Azonao atao ny mikaroka amin'ny daty farany amin'ny vanim-potoanao farany sy ny datin-kevitry anao. Hisy hatrany fomba fohy kokoa hanatsarana ny soritr'aretinao amin'ny maha-bevohoka anao isan-kerinandro.
Araka ny filazanay azy dia hampiditra lahatsoratra tsy tapaka mikasika ny fividianana zaza amam-behivavy, lisitry ny fanomezana, eny fa na dia hevitra kely momba ny dite aza. Maharaha vaovao! Tsy misy ampitahaina amin'ny fahagagana sy ny majika amin'ny maha-bevohoka. Ny fahafahanao mandray anjara amin'ny dingana lehibe indrindra amin'ny famoronana. Ny fiomanana mialoha ity traikefa ity dia afaka manatsara ny fahafahanao hanao soa ho anao sy ny zaza. Izany dia afaka manampy amin'ny famantatra na manamaivana ny soritr'aretina vohoka. Ny fomba fiainanao dia misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny zanakao, saingy mety hisy fiantraikany eo aminao koa ny soritr'aretin'ny bevohoka isan-kerinandro. Amin'ny fikarakarana ny herinandro ho vohoka ianao dia manome toky anao sy ny zanakao misedra zavatra tsara ary misoroka zava-dratsy mandritra ny fotoana maha bevohoka anao. Raha vao fantatry ny ankamaroan'ny vehivavy fa bevohoka izy ireo dia iray na roa volana raha vao bevohoka. Rehefa mahita ny dokotera izy ireo dia roa na telo volana eo. Izany no mahatonga ny fitsaboana ny soritr'aretina isaky ny herinandro. Ny herinandro voalohany amin'ny herinandro 12 isaky ny bevohoka dia satria zava-dehibe amin'ny zaza ny rafitry ny taova lehibe. Maro ny zavatra manan-danja mety hitranga alohan'ny hahafantaranao ny bevohoka na ny dokotera. Ny fananana vohoka dia midika hoe fiomanana ara-batana sy ara-tsaina. Hiaina fiovana lehibe ianao mandritra ny fotoana maha bevohoka anao. Ny fahasalamana ankapobeny alohan'ny fitondrana vohoka dia afaka manampy anao hiatrika ny adin-tsaina ara-batana sy ara-pihetseham-po eo amin'ny fitondrana vohoka sy ny asa ary ny fanomezana. Hanampy anao hiomana hikarakara ilay zaza vao teraka koa izany. Manampy anao hamantatra ny soritr'aretin'ny vohoka ianao isan-kerinandro. Amin'ny alàlan'ny famantaranandro herinandro momba ny fitondrana vohoka sy ny blôgy mifandraika amin'ny bilaogy dia ho voaomana tanteraka ianao.
Jereo ny tranokalanay amin'ny fiteny samihafa, amin'ny fampiasana ny navigation eo amin'ny ankavanana. Ankoatra izany, azafady azonao atao ny miresaka amin'ny herinandrom-pananahanao manokana amin'ny herinandro, ny soritr'aretina, ny traikefa, sns.
Sokajy Select Category 12 herinandro bevohoka Ny soritr'aretina vetivety amin'ny 16 18 herinandro bevohoka Ny soritr'aretina vetivety amin'ny 2 Ny soritr'aretina vetivety amin'ny 8 Ny fivoahana amin'ny fitondrana vohoka Fanombohana momba ny fitomboan'ny zaza Fahasalamana mahasalama Molar Pregnancy Aretina maraina Pregnancy Herinaratra Ny soritr'aretin'ny vohoka Herinandron'ny horonan-tsary mikasika ny herisetra Toby Pregnancy
Tsy dokotera sy fampahalalana ato amin'ity tranonkala ity isika dia tsy mametraka torohevitra ara-pitsaboana. Manao ezaka tsara izahay mba hanomezana fanazavana marina saingy tsy manome antoka izahay. Mamporisika anao izahay hikatsaka torohevitra hendry avy amin'ny dokotera na OBGYN.
Misaotra ny fanamarinana ny bilaogy Pregnancy by Week. Ny lohahevitry ny tranonkala dia bevohoka isan-kerinandro. Manana soritr'aretina isan-kerinandro isika, ary misy fampahalalana mifandraika amin'izany, manomboka amin'ny fampidirana am-bohoka.
Copyright © All rights reserved. Disclaimer: Isika tsy dokotera sy ny vaovao mikasika ny tranonkala ity dia tsy anisan'ny torohevitra ara-pitsaboana. Manao ezaka tsara izahay mba hanomezana fanazavana marina saingy tsy manome antoka izahay. Mamporisika anao izahay hikatsaka torohevitra hendry avy amin'ny dokotera na OBGYN.